Abavelisi beComputer of Filtration - Abathengisi baseChina baseFltration kunye neFektri
Inkqubo yoNyango lwaManzi eyi-5673 ye-Countertop Ultrafiltration
Izinto zeplastikhi ekumgangatho wokutya ziqinisekisa amanzi okusela acocekileyo nangangcoliswanga.
Icwecwe kunye nokuyila okufanelekileyo kufanelekile nasiphi na isitayile sasekhaya kwaye ugcine ngokugqibeleleyo indawo yakho yokuphakama.
Iza nesahluleli sompompo ukufezekisa ukhetho olulula phakathi kwamanzi aluhlaza kunye namanzi acociweyo.
Isiseko sinamathele ngokuqinileyo kwindebe yokutsala ukubeka iitafile okanye izinto zokubala, ukubonelela ngozinzo ukunqanda ukuhambahamba ngelixa usetyenziswa.
Icebo lokucoca ulwelo oluchanekileyo olubonisa indawo yokubonisa isihluzi ukwazisa xa ilixesha lokutshintsha isihluzo sakho.
Isiciko sokuthengisa sinokujikelezwa nge-360 ° ukufumana amanzi ngokukhululekileyo.
Inkqubo yoNyango lwaManzi eyi-5677 ye-Countertop Ultrafiltration
Izinto zeplastikhi ekumgangatho wokutya ziqinisekisa amanzi acocekileyo nangangcoliswanga.
Fumana ukungcamla amanzi ngaphandle kokuchitha imali kumanzi asebhotileni alahlwayo. Umphanda wamanzi kwinqanaba lokutya ngecebo lokucoca ulwanele ukugcwalisa iikomityi ezili-10 zamanzi acocekileyo kunye namanzi amatsha.
Faka umatshini (hayi owe-elektroniki) ukubala inani lokugcwaliswa kwaye uxele ukuba uza kulitshintsha nini icebo lokucoca ulwelo.
Imithombo yolwazi eyahlukeneyo yeefilitha iyafumaneka ukufezekisa intsebenzo eyahlukeneyo yokuhluza. Ngokusisiseko inokususa umhlwa, intlenga kunye namanye amasuntswana amakhulu, intsalela yeklorini, ibacteria, umbala kunye nevumba, njl.
Icebo lokucoca ulwelo ithatha iinyanga ezi-3 ukuya kwezi-6.
Isixhobo sokuhambisa amanzi eshushu esisebenza ngokukhawuleza samakhaya angama-5445 nakwiindawo zokusebenzela
Amaqondo obushushu ohlukeneyo amanzi kunye nexabiso lamanzi elifumanekayo ukuze lisetyenziswe yonke imihla.
Faka isibonisi esifanelekileyo sokukuvumela ukuba ubuyisele nini isihluzo.
Iza ngoyilo olungqongqo kunye nesitayile, akukho fakelo lukhethekileyo luyafuneka
Izinto ezisetyenziswa kuNyango lwaManzi, Inkqubo eQhelekileyo yeNdlu yokuBuyisa iOsmosis, Umcoci waManzi kwiNdlu iphela, IsiCoci seCartridge sokuThinta amanzi, Icebo lokucoca ulwelo lwasekhaya, Eyona ndlela ibuyileyo yokubuyisela umva kuOsmosis,